‘अर्ली इलेक्सन’मा नजाने प्रधानमन्त्रीको सन्देश, ओली तनाबमा — Imandarmedia.com
‘अर्ली इलेक्सन’मा नजाने प्रधानमन्त्रीको सन्देश, ओली तनाबमा
काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद्को कार्यकाल एक वर्ष बाँकी रहँदै जनादेशमा जानुपर्ने माग गरिरहेका वेला प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुक ‘अर्ली इलेक्सन’मा नजाने सन्देश दिएका छन्।
संविधानका साथसाथै संसद् पनि बचाउन अहिलेको गठबन्धन बनेकाले यो पूरा कार्यकाल चल्ने उनको भनाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद्को कार्यकाल एक वर्ष बाँकी रहँदै जनादेशमा जानुपर्ने माग,
गरिरहेका वेला प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुक ‘अर्ली इलेक्सन’मा नजाने संकेत गरेका छन्। आइतबार माओवादीको आठौँ महाधिवेशनमा शुभकामना दिँदै उनले अहिलेको सत्ता गठबन्धन संसद्को कार्यकालभरि चल्ने बताए।
अहिले हाम्रो गठबन्धन बनेको छ। यो कसैका विरुद्ध होइन। संसद् विघटन नभएर पूरै चलोस् भन्ने उद्देश्यका साथ संविधान बनाइएको हो। म पनि संविधानसभा सदस्य थिएँ। संविधान बनाउने काममा मेरो पनि योगदान छ।
अदालतमा समेत गएर बनाएको जुन पाँचदलीय गठबन्धन छ यो कसैको खिलापमा होइन, प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘संविधानका साथसाथै संसद् पनि बचाउन गठबन्धन बनेको हो। यो गठबन्धन पूरा कार्यकाल चल्छ।
यसमा कसैले शंका नगरे हुन्छ। म त अझै अगाडि पनि गठबन्धन जाओस् भन्ने चाहन्छु। ओलीजीहरू र अरू पार्टीहरूलाई नलागोस्– हाम्रो खिलापमा गठबन्धन बन्यो।
पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलका शीर्ष नेताहरूले पनि संवैधानिक र राजनीतिक संघर्षको बलमा पुनस्र्थापित संसद्को कार्यकाल पूरा हुनुपर्ने र चुनावसम्मै गठबन्धन लैजानुपर्ने मत राखिरहेका छन्।
१४औँ महाधिवेशनबाट कांग्रेसको सभापतिमा दोहोरिएको दुई साता नबित्दै प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्को कार्यकाल र गठबन्धनको भविष्यबारे बोलेका हुन्। उनले गठबन्धन कसैको विरुद्ध नरहेको पनि स्पष्ट पारे।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धनका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले दिएको अभिव्यक्ति धेरै ठूलो रहेको र आफूहरूको चाहना पनि त्यही रहेको बताए। उहाँ देउवाले म गठबन्धन चाहन्छु। चुनावपछि पनि चाहन्छु भन्नुभयो,
प्रचण्डले भने, तपाईं–हामीले सुन्न चाहेको त्यही थियो, उहाँको मुखबाट। गठबन्धन जान्छ भन्दिनुभयो। त्यो पनि ठूलो स्टेटमेन्ट भन्दिनुभयो, उहाँले। हामी सबैलाई चाहिएकै त्यही हो।
आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको बेला प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ आएको हो। कांग्रेसकै केही नेता अर्ली इलेक्सन’को पक्षमा नरहेको वेला पार्टी सभापतिसमेत रहेका देउवाले संसद्को कार्यकालमाथि धारणा राखेका हुन्।
१२ माघमा हुन थालेको राष्ट्रिय सभाका १९ सिटको चुनावमा पाँचदलीय गठबन्धनले संयुक्त रूपमा लड्ने निर्णय गरिसकेको छ। गठबन्धनकै बलमा देउवा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्।
कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। नेपालको राजनीतिमा विभिन्न दलहरूले एकताबद्ध भएर अघि बढ्दा सफलता हासिल गरेका छन्।
अहिले पनि हामीले एकताबद्ध भएर जानुपर्ने आवश्यकता छ, अध्यक्ष नेपालले भने, विभिन्न दलहरूका आ–आफ्ना मान्यता हुन सक्छन्, एक–अर्काका कुरामा सहमति नहुन पनि सक्छ, तर मूल कुरामा हाम्रो सहमति छ भने बाँकी कुरालाई थाती राख्न सकिन्छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पुनस्र्थापित संसद्ले कामै गर्न नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन्। पार्टी विभाजनसँग जोडिएको मुद्दालाई लिएर एमालेले लगातार संसद् बैठक अवरोध गर्दै आएको छ।
एमालेको अवरोधका कारण संसद्मा विधेयक अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। महाधिवेशनलाई शुभकामना व्यक्त गर्न पुगेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भने समाजलाई लाभ हुने काम गर्न नसके पाँच वा ६ दल मिलेर केही नहुने बताए।
पार्टी बलियो बनाउने कुराको मात्रै कुनै अर्थ हुँदैन। मुख्य उद्देश्य भनेको बलियो पार्टीले समाज बदल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो। समाजलाई बदल्न सक्छौँ भने हामी हुनुको अर्थ हुन्छ, गठबन्धन गर्नुको अर्थ हुन्छ। यदि समाजलाई लाभ हुने काम गर्न सक्नुहुन्न भने पाँच दल वा ६ दल मिलेको कुनै अर्थ हुनेवाला छैन, महासचिव पोखरलले भने।
त्यस्तै, शुभकामना मन्तव्यमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसीमा आफूले गलत निर्णय नगर्ने आश्वासन दिए। एमसिसी राष्ट्रघाती भनेकाले यहाँ बोल्नैपर्ने भयो । मैले त कहीँ पनि राष्ट्रघात देखेको छैन। म पनि नेपालको प्रधानमन्त्री हुँ।
नेपाल राष्ट्रको खिलापमा जाउँला म? म पनि राष्ट्रका लागि लडेको मान्छे हुँ। के राष्ट्रघात काम गरौँला? राष्ट्रघाती सन्धि किन गरौँला? देउवाले भने, हाम्रो बीचमा छलफल हुँदै छ। प्रचण्डलगायत नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ। एमसिसी नेपालको हितमा छ। राम्रोसँग बुझ्नुपर्‍यो क्या! मलाई लाग्छ, यसमा सहमति भएर हामी पास गर्नेछौँ।
एमसिसीबारे देउवाले आफ्नो विचार राखेको भन्दै त्यो उनको स्वतन्त्रताको विषय भएको प्रचण्डको भनाइ थियो। उहाँले आफ्नो विचार भन्नुभयो, त्यो स्वतन्त्रता उहाँलाई छ। एमसिसीबारे उहाँले आफ्नो कुरा भन्नुभयो।
उहाँले कहाँ हो राष्ट्रघाती भएको, त्यो देखाइदिनुपर्‍यो मलाई भन्नुभयो। के म राष्ट्रघात चाहन्छु त ? म पनि देशभक्त हो भन्ने त प्रमाणित छ भन्नुभयो, उनले भने, हामी छलफल गर्दै छौँ, छलफल गरेर हामी समझदारी बनाउँछौँ भन्नुभयो। यो पनि ठूलो कुरा नै भन्नुभयो।
महाधिवेशनलाई शुभकाना व्यक्त गर्न पुगेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भने समाजलाई लाभ हुने काम गर्न नसके पाँच वा ६ दल मिलेर केही नहुने बताए। पार्टी बलियो बनाउने कुराको मात्रै कुनै अर्थ हुँदैन। मुख्य उद्देश्य भनेको बलियो पार्टीले समाज बदल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो।
समाजलाई बदल्न सक्छौँ भने हामी हुनुको अर्थ हुन्छ, गठबन्धन गर्नुको अर्थ हुन्छ। यदि समाजलाई लाभ हुने काम गर्न सक्नुहुन्न भने पाँच दल वा ६ दल मिलेको कुनै अर्थ हुनेवाला छैन, महासचिव पोखरलले भने।
उनले यसअघि माओवादी केन्द्रसँग गरेको एकता इमानदार प्रयास भएकोसमेत जिकिर गरे। नेकपा गठन कुनै गलत थिएन, त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता थियो। तर, त्यसलाई हामीले जोगाउन नसकेकोमा मलाई पछुतो छ। त्यस अर्थमा हामी हिँड्ने बाटो इतिहासको शिक्षाका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्नेछ, उनले भने। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि महासचिव पोखरेलको भनाइमा आफू पनि सहमत रहेको बताए।
‘महासचिवको हैसियतले उहाँले जे कुरा राख्नुभयो, त्यो हामी सबैका लागि मननयोग्य नै छ। मलाई मनभित्र लागेको हामीले पार्टी एकता गरेर गल्ती गरेका थिएनौँ भन्ने छ। म शंकर पोखरेल र उहाँमार्फत सिंगो एमालेका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु– हामीले गल्ती गरेका थिएनौँ,’ प्रचण्डले भने, ‘फेरि एकपटक आत्मसमीक्षा गरौँ। कहाँ थियो त गल्ती ? के कारणले हामी दुई ठाउँमा हुन पुग्यौँ ?
के कारणले त्यत्रो सपना हामी आफैँले भत्कायौँ ? त्यसको समीक्षा गरौँ। हाम्रो उद्देश्य गलत थिएन। उनले आफूले देशलाई स्थायित्व र समाजवादतिर लैजाने सपना पूरा गर्ने उद्देश्य राखेर एमालेसँग पार्टी एकता गरेको दोहोर्‍याए।
सत्तागठबन्धन दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेप्रति इंगित गर्दै संसद् अवरुद्ध गरेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै हठ त्याग्न आग्रह गरे। अहिले गठबन्धनको सरकार छ।
विगतका सरकार र प्रधानमन्त्रीहरूले गरेका गल्तीलाई गनेर मात्रै अब समस्याको समाधान हुँदैन। अब हामीले विगतमा भएका कमीकमजोरी र गल्तीलाई सच्याउनुपर्छ र सुधार्नुपर्छ, यादवले भने,अब संसद् अवरुद्ध गरेर केही प्राप्त हुँदैन। माधवजी संसद्मा हुनुहुन्छ, त्यही कारण अवरुद्ध गरेँ भनेर कमरेडहरू भन्नुहुन्छ। यस किसिमका हठ त्यागौँ।
संविधान संशोधन गरेर सबैलाई स्विकार्य हुने बनाऊँ। शुभकामना मन्तव्यमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको राजनीतिमा प्रचण्डले ठूलो योगदान दिएको भन्दै शान्ति–प्रक्रिया पूरा गर्ने बताए। यो संविधान बनाउने काममा पुष्पकमल दाहालजीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण योगदान छ,
भन्ने हामी सबैले मान्नुपर्छ। शान्ति–प्रक्रियामा पनि प्रचण्डको ठूलो योगदान छ। अब शान्ति–प्रक्रियाका केही कुरा बाँकी छन्। हामी शान्ति–प्रक्रियालाई पूरा गराएर सदाका लागि स्थायी शान्तिमा जानेछौँ। यसमा तपाईंहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, प्रधानमन्त्री देउवाले भने।